Isika ao Brezila
Indray mandeha ao Brezila avy any Brezila nitondra ny fiofanana, eo amin’ny fiara ho an’ny olona (ny fomba raiki-pitia sy ny hitifitra ny vehivavy raha tsotra) tonga Eto ny lehilahy iray eo ho eo ny vehivavy Breziliana, ary manomboka mihira serenades momba ny fomba izy no tsara tarehy sy tsy manam-paharoa sy ny tsara indrindra sy ny maro hafa tsara tarehy teny. Ny ankamaroan’ny vehivavy vonona ho azy any anaty afo sy tao anaty rano. Satria, farany, fara-fahakeliny olona nahatsikaritra, mankasitraka, tsaboina, azy, Mialoha, toy ny Mpanjakavavy. Fa ny Breziliana dia ampiasaina ho azy avy amin’ny fahazazany: na ny mampamangy sy ny saina, sy amim-piderana, sy ny fanajana. Ary bbw, ary ny vehivavy amin’ny Ankapobeny rehetra. Ary ity lehilahy ity dia very any amin’ny vahoaka ny Breziliana ny olona. Amin’ny dingana rehetra, miala tsiny, ny phallus. Ny fitiavana sy ny fanajana, dia avereno ao ny sary sokitra, mivarotra hazo ny habe rehetra. Ny mpivarotra mino aho. Raha toa ka manana ny tovovavy, misy ity trano ity, dia mora ny maso. Ny tena faniriany ao amin’ny dingana tsarovy mba hahatonga ary avy eo dia marina kokoa ny mamolavola Sy tsy dia mila mandeha any Brezila. Oh, nisy zavatra aho manalavitra. Satria aho dia mahaliana ny mahafantatra ny tantara ary vao roa volana ny traikefa, hilaza ny fomba ny zavatra tena aho dia mangataka Ilona, izay any Brezila, tonga eto tovovavy irery ianao ary efa mahalala ny zava-drehetra momba ny Breziliana ny lehilahy fa indrindra ny fitiavana hira momba azy, momba ny fitiavana sy ny tsy faly ary noho izany na dia maro loko kokoa. Rehefa raiki-pitia amin’ny Breziliana, tsy mahatakatra ny antony mahatonga ireo hira rehetra momba azy. Izy ireo dia nandamina ny-izy ireo dia mahafantatra fa indray andro ao amin’ny maraina na aorian’ny misasakalina any ny sasany bar misotro, dia jereo ny Breziliana sy ny Breziliana ny tsy mampino mety hampahasosotra, manomboka miresaka amin’ny vahiny mora foana toy izany, toy ny hoe ianao ny fiainana manontolo ny fiainana ao amin’ny stairwell. Ary izany fotsiny ny tsy fahazoan-kevitra, dia mbola tsy fantatsika Momba ny vehivavy, ny zava-drehetra dia tsotra — dia noho ny fitiavana ny Breziliana sy ny fahafahana be mampamangy, ny tsirairay dia mahazo levitra ambony ny saina. Ary satria aho ary zatra ny nahita izany amin’ny eny an-dalambe tena tsara, chubby vehivavy ao mafy tights amin’ny micro-lohahevitra, manamafy isaky ny olombelona. Ary fantany izy no tsara tarehy. Mazava ho azy, dia mety mangina velona noho ny zavatra hafahafa ny gazety manaraka ny fenitra, fa tsy ny saina dia tsy hijanona. Ary toy ny lehilahy Breziliana, dia tsara, dia toy ny hatsarany, ary ry zareo ny vehivavy tsirairay dia afaka mahita ny zavatra tiany. Heverina ho ny tsara indrindra Eoropeana endri-javatra sy ny manga ny maso. Mitambatra io matetika miteraka ny tena hafanam-po tsy hoe fotsiny ho an’ny lehilahy, ny tsara sy ny vehivavy. Ny zavatra tena tsy hanafina. Ohatra, tiako mba hahafinaritra ny takolany ny vahiny vehivavy antitra, izaho dia efa zatra azy, ary nitsahatra ny ho feno mangatsiaka ny hatsembohana raha olona manatona ny tanana eo amin’ny tavako. Amin’ny Ankapobeny, ny kolontsaina dia tena mafana, dia mamela anao mba hiantso ny fivarotana»ny voninkazo»ary rehefa tapitra ny taratasy siansa mpampianatra amin’ny mpianatra mba hanoratra»manontolo». Ary ireo, marihina fa marina rehefa fivoriana sy parting, oroka samy hafa ny takolany. Handeha ho ny vahiny rehetra mino fa Breziliana sy ny Breziliana ireo manambitana tsara eo am-pandriana. Tsara rehefa avy Nahita ny fotoana iray ny fomba hisarihana ny rollicking valo andilany ao amin’ny dihy dia hanjavona ao amin’io fanontaniana farany. Ao afovoan-tanàna ny toerana misy ahy dia lehibe phallic sary sokitra, antsoina hoe»hazon’aina»ary misy dia tena tsara tranom-Bakoka, toy izany koa ny mpanakanto amin’ny toy izany sary sokitra. Teny an-dalana, mikasika ny fivavahana Katolika — ny maro amin’ireo Breziliana no ara-pivavahana, nefa tsy manakana azy ireo hankafy ny fahafinaretana rehetra ny fiainana. Anisan’izany, ohatra, ny hanova ny vehivavy sy ny vadiny.
Ny Breziliana penchant ny tantara an-tsehatra eto dia hita feno famirapiratana. Mihevitra izy ireo fa ny tia faly tsara rehetra te fotsiny. ny fitiavana ny Breziliana manokana tranga. Ny vehivavy no tsara indrindra, amin’ny zavatra rehetra.
Ary ny fotoana
Dia miantso ny tsirairay»ny fitiavana»ary tena mampangoraka. Indray mandeha ny Mpampianatra antitra tonga miala tsiny ary nilaza fa»ny Andriambavy»mahatsapa marary, nanapa-kevitra aho fa izany dia mikasika ny zafikeliny. Fa tsy, pereproshit, nianatra aho fa ny vadiny efa miaraka nandritra ny dimam-polo taona. ny tsara indrindra izay efa nitranga taminy. Salama bilany-bellied olona tena mahatehotia Lisp miaraka ny andefimandriny sy ny zanany, toy ny indray mandeha angamba koa nifandray taminy, araka ny reny. Miahy ny vehivavy izy ireo no lehibe, indraindray izy ireo na dia kely strident, saingy tsy detract avy amin’ny fahamendrehana. Matetika ny olona mandoa, ary manome ny fianakaviana, fa miovaova amin’ny fifandraisana amin’ny mihamaro ny hetsiky ny mpiaro ny vehivavy, ary izaho nenina ny mahita fa ny taona ankizy, ary koa ny zo galantee noho ny tanora mpiara-miasa aminy. Toy ny fitsipika, ny Breziliana ny afovoany sy ny saranga ambony tsy manary rehetra ny enti-mody na ny ankizy isaky ny vehivavy, dia manana ny iray amin’ny mpiasa. Raha tsy izany, dia izy ireo no azo inoana fa ny tenany mba sasao ny vilia. Ny ray aman-dreny ny Breziliana hahazo ny tena nampihetsi-po, malefaka ary matetika dia tena miaro. Eto dia heverina ho tena ara-dalàna ny miara-miaina amin’ny ray aman-dreny mandra-fanambadiana, na ny fanambadiana, izay taona. Fanambadiana sivily dia tsy fahita. Izy ireo dia matetika fifandraisana maharitra miara-miaina amin’ny ray aman-dreniny sy ny lasa tsy tapaka ny mpanjifa ny motels ary avy eo dia mahazo manambady sy nifindra tao an-tranony. Ary mitohy ho any amin’ny ray aman-dreniny ny alahady, izay bunch ny dadatoa nenitoa. Ny ankizy any Brezila dia tena lafo, indrindra noho ny vidiny ny fanabeazana. Ankehitriny dia tsy misy fianakaviana amin’ny ankizy toy ny teo aloha, saingy mbola ireo rehetra te-ary awfully mirehareha voalohany bevohoka kibo, ary avy eo ny mpandova. Toy ny ao amin’ny andian-dahatsoratra ao ireo lehibe fianakaviana manana ny tantara amin’ny haingana peeped ao amin’ny andian-dahatsoratra sary sy ny tsy latsaky haingana ny fampihavanana. Ady sy mandefitra, Breziliana tsarovy fa ny fitiavana no zava-dehibe indrindra ary raha izany dia tsy misy isalasalana fa ny rivotra ho foana ny fofona toy ny mafana ny fitaovam-piadiana dia feo ny gadona ny Samba sy ny dingana rehetra dia ho nanelatrelatra sparkle ny oram-panala-fotsy tsiky. PS Raha Ilona nanoratra ity lahatsoratra ity, aho nahita ny tenako ivelan’ny efitra fandroana varavarankely (ao an-trano Breziliana efa tsy misy fitaratra, afa-tsy hazo na vy mahamay) liana ny Negro, izay nijery aho raha handro. Avy hatrany Visionen lahy rahavavy izay nianatra momba izany, dia awfully tezitra sy nikarakara ny manontolo nanenjika. Mba hisambotra na izany na tsy, fa izaho-kafanam-po tokoa no atolotra ny basy. (Any Brezila afaka mitifitra olona izay nahazo anao amin’ny fananana manokana, na dia eo amin’ny tany), fa ny basy tsy afaka mampiasa, afa-tsy mahafantatra ny fomba hametraka famantarana eo amin’ny Lalamby manodidina ny trano, ary voafetra Ary tena tiako fa ny alahady ho an’ny fianakaviana. Mandeha rehefa mandany fotoana miaraka amin’ny fianakaviana
← Roulette ankizivavy milalao. Amin'ny Chat roulette amin'ny ankizivavy. Ny lahatsary amin'ny chat miaraka amin'ny ankizivavy ho maimaim-poana
Ankizilahy sy ankizivavy ao Rio mahatsapa ny fahasamihafana →